Latin America iyo Spain: Mashaariicda Blockchain ee leh Cryptocurrencies | Laga soo bilaabo Linux
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ee Isbaanishka iyo Latin Amerika
Sida ku cad daraasada dhawaan la daabacay ee cinwaankeedu yahay Daraasadda Global Cryptocurrency Benchmarking uu hogaaminayo Dr. Garrick Hileman iyo Michael Rauchs, cilmi baarayaal ka socda Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), Bitcoin ayaa ah tan adduunka looga aqbalo cryptocurrency oo ay wadaagaan labada ganacsi, shakhsiyaad, macdan qodayaasha, boorsooyinka iyo guryaha sarrifka; Si kastaba ha noqotee, altcoins waxay u taagan yihiin beddel adag oo muujinaya koror jibbaar ah isticmaalkooda, qiimaha iyo aqbalaadda.
In kabadan 1600 cryptocurrencies la isku halleyn karo oo la beddeli karo ayaa hadda lagu xisaabiyaa adduunka oo dhan guryaha waaweyn ee sarrifka iyo suuqyada hantida hantida adduunka ee adduunka, ahaansho Isbaanishka iyo Latin Amerika 2 suuqyada sii kordhaya ee suurtagalka ah marka la eego hantida crypto iyo cryptocurrencies. Daabacaaddan waxaan ku baari doonnaa waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee ugu badan Spain iyo Latin America si qiimeyn caddaalad ah loogu sameeyo xaaladda hadda jirta ee arrintan.
2 Liiska Cryptocurrencies
4.1.2 Ugu fiican:
4.3.1 Nióbio Lacagta:
4.4.1 Digirta cagaaran:
Xilligan cusub ee FinTech waxoogaa yar oo yar ayaa ku soo ifbaxay dhalashada Teknolojiyada 'Blockchain Technology' ee adduunka, dib ugu soo noqoshada 2.009 markii la abuuray Bitcoin, Waxay sababtay ilaa maanta soo bixitaanka iyo koritaanka jaangooyooyin fara badan oo dawladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay, muwaadin iyo ganacsi, oo ku yaal barxadda alaabada iyo adeegyada oo ay weheliso isticmaalka astaamaha, hantida loo yaqaan 'crypto hantida' iyo 'cryptocurrencies', adduunka oo dhan, ahaanshaha Isbaanishka iyo gobolka Latin Amerika wuxuu tusaale fiican u yahay iyaga.
Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah soo jiidashada ugu weyn ee cryptocurrencies, taasi waa, baahintooda, taas oo gobollada sida Latin America ah tani u oggolaanaysa nooc cusub oo hanti ah oo aan la xakamayn, xaddidin ama xannibin dal gaar ah, dawlad ama hay'ad dawladeed ama hay'ad bangi oo gaar loo leeyahay.
Xaqiiqdii qaar ka mid ah waqtiyadii ugu dambeeyay, ay abuureen dawlado ama hay’ado gaar loo leeyahay ama shakhsiyaad leh taageero maldahan ama si dahsoon oo ay leeyihiin awoodaha qaarkood ama hay’adaha qaran, qaarna xitaa waxaa loo abuuray in looga ganacsado dhagaystayaal gaar ah.
Kooban soo koobida waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee aadka loo aqoonsan yahay laguna kalsoonaan karo ee hoos lagu soo bandhigay, iyadoo loo kala horrayo xuruufta isla markaana lagu ururiyay waddanka ay ka soo jeedaan, waa tusaale yar oo ka mid ah kuwa hadda jira oo loo abuuray ujeedooyin kala duwan, sida: Dhiirrigelinta dhaqaalaha qaranka ama kan gaarka loo leeyahay, heerka iyo kordhinta xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee magaalooyinka ama bulshada maamulkooda, taageeridda horumarinta dadaallada dadweynaha. ama mid gaar loo leeyahay, ama lagu gaaro qaadashada maxalliga ah teknolojiyad cusub.
Y In kasta oo cryptocurrencies aysan ahayn dawada ama xalka saxda ah ee lagu hagaajinayo dhaqaalaha wadamada Latin Amerika, tusaale ahaan, oo laga yaabo inay sii waddo helitaanka xaddidaadyo dawladeed ama kuwa gaar loo leeyahay ama caqabado ka jira waddamada qaarkood si ay u korsadaan lacag la'aan, Kuwani waxay sii wadi doonaan inay noqdaan dariiqa deg-degga ah ee dad badan si ay u horumariyaan tayada noloshooda ayna uga badbaadaan xaaladaha dhaqaale, dhexdhexaad ama daran, ee waddan kasta oo gobolka ka mid ah.
Kuwo badan ayaa ah mashaariicda hadda laga fulinayo Spain iyo Latin America inbadanna waa lagu guda jiraa, oo kaliya maahan meelaha sida tikniyoolajiyadda ama maalgelinta kaabayaasha, laakiin dalxiiska, waxbarashada iyo maareynta dowladda. Tusaalooyinka, sida:
Waxaa laga soosaaray Bitcoin iyo Litecoin laakiin waxaa diirada la saaray dhinaca Isbaanishka iyo macdanta wada jirka ah. Ka eeg wax intaa ka badan oo ku saabsan iyada Coinmarketcap.
Gastronomic cryptoasset oo si gaar ah loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo Nostrum, silsiladda cuntada Isbaanishka laga qaado. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ballanqaadaysa inay dimuqraadiyeynayso macdanta iyada oo loo marayo 'caddeynta isku raacsanaanta' algorithm iyo nooc u gaar ah ee macdanta, oo loo yaqaan Jaspberry. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency (Token ERC-20) oo loo abuuray inay ka ganacsato oo ay maalgashi ku sameyso shabakada baahsan ee caalamiga ah ee Shabakada Inbest oo ujeedadeedu tahay inay ka dhigto suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' qof walba. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ku saleysan tiknoolajiyada xannibaadda oo loogu talagalay barnaamijka Ethereum ERC-20, oo yeelan doona Wallet elektaroonik ah. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Xawaaladda loo yaqaan 'Cryptocurrency' ee ku haminaysa inay noqoto hab lacag bixin dhakhso leh, aamin ah oo hufan. Intaa waxaa dheer kor u qaadista cilmi baarista Teknolojiyada FinTech ee dalka. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ku saleysan koodhka isha ee Litecoin isla markaana loogu talagalay in lagu buuxiyo doorka "qaabka" cryptoasset "si loo hago horumarka mustaqbalka. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo raba inay aasaas u noqoto awoodda macluumaadka shakhsi ahaaneed ee isticmaale kasta iyada oo loo marayo xayiraad macaamil ganacsi qarsoodi ah oo ka baaraandegta xogta iyada oo loo marayo codsiyada baahinta ee isticmaalka bilaashka ah. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Marka hore Chilean Ethereum Token oo doonaya inuu u soo dhoweeyo tiknoolajiyada xannibaadda dadweynaha iyada oo kor loo qaadayo aqoonta isticmaalka astaamaha iyo qoto dheerida aqoonta loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency ayaa loo dallacsiiyay inay tahay tii ugu horreysay ee 100% Latin America ee loo yaqaan 'cryptocurrency' iyo tan kaliya ee ku dhalatay shabakad ballaaran oo korsashada iyo adeegsiga, si loogu isticmaalo lacag caddaan ah oo dijitaal ah, isla markiiba. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ay taageerto sumurudyada reer Colombia oo bixiya isku dhaf ah
hubi hantida dijitaalka ah ee ay maamusho xannibaadda iyo sumcadda jirka ee reer Colombia
khasnadaha amniga ee shirkadaha sanduuqa dhigaalka ee aaminka ah. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency ayaa loo abuuray si loogu isticmaalo gudaha "Trisquel Premium" Nidaamka 'Crypto Ecosystem', kaas oo ah nidaam bey'adeed oo ganacsi iyo adeegyo ah oo ay Cryptoeconomics loogu dallacayo heer caalami qaab xirfadle ah, waarta oo aamin ah oo ujeedadeedu tahay in dadka wax lagu baro si ay u muujiyaan awooddooda dhabta ah ee cryptocurrencies. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Waa cryptocurrency baahinta baahsan oo ay xukumaan dadka, oo ay taageerayaan is afgarad iyo guddiyada ganacsatada. Wuxuu rajeynayaa inuu kacdoon ku sameeyo altruism-ka isagoo isku waafajinaya dhiirigelinta dhaqaale ee bulshada baahinta. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ay si wada jir ah u soo saareen Qaybta FinTech ee Shirkadaha Cuba, Revolupay® iyo barnaamijka amaahda CubaFIN, iyada oo ujeedadu tahay in laga dhigo mid caalami ah oo loo yaqaan 'cryptocurrency', oo qiimaheedu kuxiran yahay lacagaha ugu waaweyn ee fiatiyaanka. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo u oggolaaneysa isticmaaleyaasha iyo horumariyeyaashu inay ka faa'iideystaan ​​tiknoolajiyaddan xoogga leh ee loogu talagalay warbaahinta bulshada, bogagga internetka, baloogyada, iyo bogagga ganacsiga e-commerce. Waxaana loo sameeyay si looga fogaado sicir bararka ka dhasha lacagaha ka baxaya wadamada aan dollariska ahayn. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo u heellan xoojinta aagga qaranka iyada oo loo marayo horumarinta hektar of basbaas habanero ah. Waa shey loo yaqaan 'cryptoactive' (badeecada maalgashiga) ee Amar Hidroponía oo u oggolaaneysa maalgashade inuu ka qeyb qaato faa'iidooyinka laga soo saaray Qeybta Wax Soosaarka ee Chile Habanero. Ma ahan weli Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ay taageerto hantida maguurtada ah ee Mexico iyo ganacsiyada, taas oo ku dhalatay ujeedada ah kor u qaadista ganacsiga, dhaqanka, dhaqanka iyo dalxiiska ee Mexico gudaheeda iyo banaankeeda Waxaa jira 7 qaybood oo tiirar ah (Real Estate, Teknolojiyada, Ganacsiga, Dalxiiska, Farshaxanka, Bilaabidda iyo Caafimaadka) ee taageera TRADcoin, taas oo gudaheeda lagu soo bandhigo mashruucyo dhab ah, la taaban karo iyo wixii ka sarreeya. Ma ahan weli Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo rajeyneysa inay noqoto hab wax ku ool ah oo hufan oo wax loogu beddelo iibsiga iyo iibinta alaabada iyo adeegyada, xallinta dhibaatada ka soo kabashada heerka "Kaydinta Qiimaha" illaa heerka "Isticmaalka Macaamilashada", iyadoo la noqonayo wakiil sarrifka la aqoonsan yahay waxaana aqbalay ganacsatada iyo shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Ma ahan weli Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo raadineysa adeegsi fudud-ilaa-dhamaadka, adoo siinaya awooda loo isticmaalo cunsur suuq, iibsi, iibin, keydin, alaabo, adeegyo, ganacsi iyo isweydaarsiga lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Abuureyaasheeda ayaa rajeynaya inay noqon doonto mashiinka loogu talagalay kobcinta madax banaan, hufan oo furan dhaqaalaha dhijitaalka ah si toos ah uga qeyb qaadashada muwaadiniinta dalka iyo adduunka, taas oo u adeegi doonta sidii goob loogu talagalay horumarinta hantida crypto iyo hal-abuurnimada Venezuela iyo kuwa kale. waddamada soo koraya. Waxay ku taal Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo la abuuray 2015 kuna saleysan dhaqanka Bitcoin, oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo qarsoodi, xawaaraha macaamil ganacsi iyo xorriyadda dhaqaale. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu abuuro cryptocurrency qaran oo lagu kalsoon yahay oo ay taageerayaan muwaadiniinta reer Venezuela. Falsafada Bolivarcoin waa in la raaco fikradaha ay dejiyeen altcoyin kale isla markaana la qabsadaan oo ka dhigaan mid saaxiibtinimo leh iyadoo laga abuurayo olole baraha bulshada si looga warbixiyo faa'iidooyinkooda iyo isticmaalkooda. Wuxuu leeyahay a degel kale oo macluumaad ah y wuxuu ku jiraa Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ku dadaalaysa in lagu abaalmariyo kartida aadanaha, oo leh sicir sarrif ah oo deggan, iyo sicir sare oo la hubo oo ah soo celinta maalgashiga la sameeyay. Raadi ah awoodsiinta dhaqaalaha shaqsiyadeed iyada oo loo marayo horumarinta qalab casri ah oo ku saleysan tikniyoolajiyadda jira, sida: Ganacsiga elektarooniga ah, macdanta POS iyo waxyaabo kale oo badan oo lagu dari doono gudaha nidaamka loo yaqaan 'Crypto Ecosystem' ee barxaddeeda, oo si joogto ah u sii kordheysa. Ma ahan weli Coinmarketcap.
Cryptocurrency waxaa loo maleynayaa inay tahay gabi ahaanba baahinta Lacagta Dijital ah. Iyada oo ah ilo il furan waxay diirada saareysaa asturnaanta waxayna balanqaadeysaa macaamil deg deg ah. Nidaamka loo yaqaan 'Crypto Ecosystem' ee Mashruuca Onixcoin wuxuu ku socdaa horumar joogto ah iyo ballaarin si uu isugu dayo inuu noqdo habka ugu weyn ee baahinta iyo habka lacag bixinta caalamiga ah ee Venezuela, iyadoo la siinayo deyn madal, iyo REST API dhameystiran oo loogu talagalay isdhexgalka nidaamyada iyo isticmaalka ugu badan ee xannibaadda, oo ka mid ah ganacsiyo iyo adeegyo badan oo kale intii lagu jiray 2018 iyo 2019. Waxay leedahay a degel kale oo macluumaad ah y wuxuu ku jiraa Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo loogu talagalay inay ahaato mid raaxo leh oo marin u leh isticmaaleyaasheeda iyagoo macaamil ka sameysanaya boorsadooda si nabadgelyo leh, si deg deg ah oo aan dhexdhexaadiyayaal lahayn. Waxaa loo sameeyay inay gacan ka geysato hagaajinta dhaqaalaha qaranka, waxay diiradda saareysaa suuqa dalxiiska ee dalka oo leh awood weyn oo looga faa'iideysan karo, laga bilaabo booqashada goobaha dabiiciga ah ee quruxda badan ee dalka ilaa laga helayo hudheelada ugu wanaagsan. Ma ahan weli Coinmarketcap.
Cryptocurrency oo ay taageerto shirkadda WolfClover, oo leh barxad dijitaal ah oo ku takhasustay adduunka xilligan cusub ee maaliyadeed, lacagaha iyo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', oo leh koox shaqo qiimo leh oo ka kooban ganacsatada reer Venezuela ee doonaya inay koraan oo fursado siiyaan dadka kale dadka, noqoshada qoys weyn oo rajeynaya inay soo qabtaan danta xubin aamin ah oo joogto ah oo leh alaabooyin kala duwan, adeegyo, kalsooni iyo nabadgelyo. Wali kuma taal Coinmarketcap.
Waxaa jira khibrado kale oo Latin Amerika ah kuwaas oo wali ku jira uurkii, horumarkii hore ama tijaabooyinkii tijaabada ahaa ee wadamada kale ee gobolka qaarkood sida imika Cryptocurrency Petro ka yimid Venezuela, ama mustaqbalka Cryptocurrencies Vara oo ka socda Guatemala, Kokicoin oo ka socda Puerto Rico ama E-Peso oo reer Uruguay ah, taas oo sida xaqiiqada ah bislaata waqtigeeda guul wanaagsanna ka soo hoyn doonta dalkooda iyo suurtagalnimada gobolka muddada dhexe.
Waxaa lagu qiyaasay in Teknolojiyada 'Blockchain Technology' iyo waxyaabaha la xiriira / faa'iidooyinka, oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan 'cryptocurrencies' kuwa ugu caansan uguna caansan, sii wadi doonaan faafitaanka iyo in la qaato dhammaan heerarka, ma aha oo kaliya heerka gobolka ee Latin America laakiin adduunka oo dhan., mid dawladeed iyo mid gaar ahaaneed, mid bulsho iyo mid ganacsi, iyo kuwo kale, si loo abuuro xaddiga ugu wanaagsan ee ladnaanta iyo farxadda bulshooyinka lagu adeegsaday.
Shaqada ama doorka ay jaamacaddu ku leedahay nidaamka maaliyadeed, tikniyoolajiyadda iyo waxbarashadu waxay muhiim u tahay xiisaha iyo adeegsiga cryptocurrencies si ay usii korodho. Tan darteed, waxqabadyada sida Kulannada, Kulammada, Wadahadallada, Koorsooyinka ama Mashaariicda Cilmi-baarista ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo in isbeddelku uusan hoos u dhigin hannaanka Dhaqaalaha Adduunka ee dhexe ee qarnigii la soo dhaafay oo wali dhexdeena ka sii socda.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato oo aad wax yar ka barato Teknolojiyada Maaliyadeed, Blockchain iyo Cryptocurrencies, waxaan kugula talinayaa inaad waxbadan akhrido, laga bilaabo xiriiriyahan gudaha ah (Nidaamyada Kale ee Hawlgalka ee Macdanta Dijital ah) iyo tan banaanka (Qaamuuska ereyada 'Blockchain iyo Cryptocurrencies': The FinTech World).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Latin America iyo Spain: Mashaariicda Blockchain ee leh Cryptocurrencies
SteamOS waa la cusbooneysiiyay si loogu ururiyo dhammaan wararka Debian 8.11
ReactOS 0.4.9 si rasmi ah ayaa loogu sii daayay astaamo badan oo cusub iyo horumarin